Resurrectione Tua ခုနှစ်တွင် ဟူ. ၎င်း string ကို octet သို့မဟုတ် string ကိုသံစုံတီးဝိုင်းစီစဉ် - ဒါဝိဒ်သည် Warin ရှောလမုန်သည် '' ဂီတ Catalog
Home / ကရိယာတန်းဆာပလာနှင့်ဆိုင်သော / strings / string သံစုံတီးဝိုင်း / Resurrectione Tua ခုနှစ်တွင် ဟူ. ၎င်း string ကို octet သို့မဟုတ် string ကိုသံစုံတီးဝိုင်းစီစဉ်
Resurrectione Tua ခုနှစ်တွင် ဟူ. ၎င်း string ကို octet သို့မဟုတ် string ကိုသံစုံတီးဝိုင်းစီစဉ်
Categories: string သံစုံတီးဝိုင်း, string Sextets နှင့် octet
မူလက 8 တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း choir အဘို့ယာကုပ်အမျိုးကိုလက်ကိုင်အားဖြင့်အီစတာသီခငျြး၏ဆာအစီအစဉ်။
ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံး Spatial အခြားကို quartet (တယော 1 နှင့် 2, Viola 1, cello 1) မှခှဲဝေတကို quartet (တယော3နှင့် 4, Viola 2, cello 2) နဲ့ဖျော်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီသီခငျြး, antiphonal ဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံး "Resurrectione Tua ခုနှစ်တွင် ဟူ. ၎င်း string ကို octet သို့မဟုတ် string ကိုသံစုံတီးဝိုင်းစီစဉ်" ပါ ပြန်ကြားချက် Cancel
string ကို sextet စီစဉ် - ဒါဝိဒ်သည်အဗရှလုံကွပ်မျက်ခဲ့ကွောငျးကွားသောအခါ
ဘုရားသခင့ခြောက်လ cello အဘို့အကြှနျုပျ၏ဦးခေါငျးအတွက်ဖြစ်
string ကိုရှစ်လုံးတွဲများအတွက်ပန်းကုံး (သို့မဟုတ် Tu es Petrus) Lay
ကြေးဝါနကို quartet နှငျ့ကွိုးအဘို့ - Wohl Mir dass ich Jesum habe (လူသားရဲ့ခွေငျးငှာအလိုရှိသောယရှေု၏ဝမ်းမြောက်သောစိတ်သညျယရှေု bleibet လိုက်စီ Freud) Salga el torillo hosquillo (ငယ်ရိုင်းသောနွားထီးတကောင်ထွက်စို့) string ကိုသံစုံတီးဝိုင်းစီစဉ်
အသံဖမ်းကို quartet များအတွက်ဂျိုဟန်-စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ (St John စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ) မှ Chorales
လေတိုက်Trió Quintet Sextets နှင့် Nonets (360)
လေတိုက်ကို quartets (129)
Flute မှ Choir (45)
ဂစ်တာနဲ့ Flute မှ (307)
တစ်ကိုယ်တော် Voice ကို (345)
တစ်ကိုယ်တော် Voice ကိုများနှင့်ဂစ်တာများအတွက်မူရင်း (133)
သင်ကြည့်ပါတယ်: Resurrectione Tua ခုနှစ်တွင် ဟူ. ၎င်း string ကို octet သို့မဟုတ် string ကိုသံစုံတီးဝိုင်းစီစဉ်